Waa maxay calaamadaynta? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Isbeddelka calaamadaynta calaamaduhu waa istaraatijiyad la tijaabiyey sannadihii la soo dhaafay, maaddaama shirkado badani ay ogaadeen in aanay muhiim ahayn in la beddelo sawirka shirkadda oo dhan, laakiin ay lagama maarmaan tahay in la hagaajiyo faahfaahin yar. Nasiib darro, marar badan lama tixgeliyo in calaamadaynta kaliya aysan tixraacin beddelka sawirka astaanta, laakiin sidoo kale. waxaa loola jeedaa beddelka magaca, habka looga hadlo calaamadda iyo qaybo gudaha ah oo ka mid ah.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in maskaxda lagu hayo in shirkad kastaa ay ka duwan tahay iyo taas go'aanka caddaynta waa in ay sameeyaan khabiiro ku takhasusay arrimahan. Taasi waa sababta ay jiraan shirkado ku jiray adduunka isgaarsiinta sanado badan oo yaqaan dhammaan fursadaha ay bixiso. Dunida suuq-geynta, waxaa loo yaqaan 'debranding', marxaladda geeddi-socodka astaanta ama badeecada, halkaas oo la tirtiro sifooyinka, magaca ama midabada tilmaamaya calaamadii hore.
1 Waa maxay sifooyinka debrading?
1.1 Isbeddelka istiraatiijiyadda suuq-geynta
1.2 Dharka astaanta
1.3 Mugga badeecada
1.4 Isbeddelka heerka tayada
1.5 Faa'iido la'aan
1.6 Dib u hagaajin
2 Khatarta ay leedahay calaamadaynta
3 Tusaalooyinka calaamadaynta
Maxay yihiin sifooyinka del debranding?
Debranding, oo sidoo kale loo yaqaan calaamad-saarid, waa hawsha calaamadaynta. Taasi waa in la yidhaahdo, habka meesha looga saaro ama wax looga beddelo astaanta badeecada ama adeegga. Waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn xeeladaha suuq-geynta si aad nolol cusub ugu neefsato calaamad. Dhiirigelinta u horseedi karta shirkad inay go'aan ka gaarto calaamadeynta waxay noqon kartaa:
Isbeddelka istiraatiijiyadda suuq-geynta
Haddii shirkadu ay go'aansato inay beddesho istaraatiijiyadeeda suuq-geyneed, calaamadaynta waxay noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee la beddelo. Sidaa darteed, waa wax caadi ah in aad go'aansato calaamadaynta, maadaama ay aad uga sahlanaan karto beddelka magacaaga.
Aad bay u badan tahay in summadadu ay dataanInkasta oo habkani uu noqon karo mid aad u badan oo la dedejin karo haddii shirkadu ay samaysay khaladaad suuqgeyneed.
Marka calaamadi noqoto astaanta ugu sareysa qaybteeda waxay u egtahay inay lumiso qiimaheeda. Dhinac, iyada oo la raacayo khatarta ahaanshaha suuqa, taas oo yarayn karta iibka. Dhanka kale, waxaa jirta suurtogalnimo sare oo ah in soo-saareyaasha kale ee alaabada isla qaybta ay koobiyeeyaan.
Isbeddelka heerka tayada
Marka badeecada ama adeeggu ay isbedelaan tayada, calaamaddu waxay lumin kartaa qiimaheeda. Tusaale ahaan, haddii soo-saaraha alaabta qurxinta uu bilaabo samaynta alaab tayo liidata, macaamiishooda ayaa laga yaabaa inay joojiyaan wax iibsiga.
Shirkad in ma dhalin faa'iidooyin Calaamadaha waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u beddesho mid kale oo faa'iido leh.
Rebranding waa mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu beddelo sawirka shirkadda.
Khatarta ay leedahay debranding
Had iyo jeer waa inaad maskaxda ku haysaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay keeni karto xeelad kasta oo suuqgeyneed. Dhammaantood waxaa laga yaabaa inay jiraan khataro isdaba joog ah oo aan la arkin jaleecada hore. Debranding waa farsamo ganacsi oo gaaban. Waxtarkeedu waxa uu ku jiraa saamaynta bilowga ah iyo kalsoonida uu dhalin karo. Inkasta oo ay leedahay fursad fiican oo lagu guuleysto, maskaxda ku hay in ay ka buuxaan khataro. Haddii macaamiilku leeyahay muuqaal summadeed oo wanaagsan, khatartu way yar tahay.
Noocyada shirkadaha waaweyni waxay leeyihiin aqoon heer sare ah iyo kalsooni, sidaas darteed sumcaddooda ayaa saameyn karta. Debranding maaha xeelad lagu dabaqi karo dhammaan noocyada kala duwan. Noocyada ka faa'iidaysan kara farsamadan waa inay lahaadaan sifooyin gaar ah oo la aqoonsan karo marka la eego. Ha ahaato midabada ama xarfaha shirkadaha, kuwaas oo ka caawiya macaamilka inuu aqoonsado astaanta jaleecada hore.
Iyada oo ku saleysan khataraha aan soo sheegnay, ugu muhiimsan, kaas oo ku dhici kara calaamad. waa luminta astaanta astaanta. Ciribtirka magaca ama astaanta waxay la macno tahay luminta qiyamka tilmaamaya astaanta.
Cola Cola waxay go'aansatay inay magaca ka saarto baakaddeeda beddelkeedana waxay go'aansatay inay magacyo dad ama erayo ay ka mid yihiin walaal, walaashii, aabbe ama hooyo. Saameyntu waxay noqotay mid ay aad ugu guulaysteen tanina waxay saamayn ku yeelatay iibka shirkadda, korna u qaaday.
Dhammaanteen waan ognahay in Starbucks aysan iibin kafeega, haddii aysan ahayn waayo-aragnimo. Sanadihii la soo dhaafay, silsiladani waxay sidoo kale beddeshay calaamadeeda, baabi'inta magaca astaanta waxayna ilaalisay calaamadda kaliya. Ujeeddadiisu waxay ahayd la mideeyo astaanta dadka si aad u sii ahaato mid ka mid ah dukaamada qaxwaha ee ugu muhiimsan kafeega adduunka oo dhan. Taasi waa sababta Waxay go'aansadeen inay weelkooda ku dhejiyaan si ay u wataan magacyada dadka.
Markii astaantan la sameeyay waxaa loo yaqaanay Pepsi Cola, maanta astaanta go'aansaday in aan sameeyo iyada oo aan ereyga Cola oo kaliya ku dheji Pepsi. Calaamaddan waxaa lagu aqoonsaday calaamadeeda, goobada leh midabada buluug, casaan iyo caddaan. Midabada qaar oo leh codad aad loo aqoonsan karo marka la wada arko.
Sababta loo isticmaalo istaraatiijiyadan waxay ahayd si fudud in la xoojiyo qiyamka astaanta shirkaddan, maadaama taariikhdeeda oo dhan ay wax ka beddeleen calaamaddooda waqtiyo aan la tirin karin taasna waxay la macno tahay in sawirka astaanta iyo iibinta labadaba ay saameeyeen.
Markii hore, astaanta Isbaanishka waxaa loo yaqaanay Telefónica. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu beddelo yoolkiisa oo uu u keeno daawadayaasha da'da yar. Laga bilaabo 2010, waxay bilaabeen inay isticmaalaan magaca Movistar.
Hadda shirkaddan waxaa laga dhigay M of Movistar. Waxay doorteen inay baabi'iyaan waxyaalihii ugu muhiimsanaa iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee M hore lahaa, iyo sidoo kale asalka gradient. Maanta M waa mid aad u fudud oo sahlan waxaana lagu arki karaa midabyo badan, buluug, caddaan, ama cagaar. Isbeddelkan waxay rabeen inay hubiyaan in calaamaddu ay gaari doonto jiilalka tiknoolajiyada cusub, iyada oo la ixtiraamayo qiyamka astaanta lafteeda.
Wiwmberritobirta es un adeegio online donde pudes subir aruurinta oo ka mid ahde tu Ordenqurxinta waayo, in pudas enviArlos a tus kala soo xiriiradiga. Kiiska dib-u-soo-celinta ee astaantan waxay la mid tahay tii Pepsi, calaamaddani waxay go'aansatay inay ka saarto "Tranfer" oo ay ka tagto oo kaliya "Anaga". Ujeedadu waxay ahayd inay ku xidhmaan bulshadooda. Hagaag, ma ay doonaynin in madalkoodu u ekaado bog aad si fudud ugu diri karto faylasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay calaamadaynta?